Dawlada Britain oo shaacisey qorshe ay safaarada uga furanayso magaalada Muqdisho | raascasayrmedia.com
← Xildhibaanadii la xanibay oo maanta Muqdisho ka duulay
Madaxda Sare Allshabaab oo shir ku leh Afgooye( Sawiro ) →
Xoghayaha arrimaha dibedda ee Britain , William Hague aya manta shacaa ka qaadi niyadisa ku aadan in dowladda Britain ay damacsantahay in ay dib u furto Safaradi Britain ee Soomalia, hadii xaaladda soomaliya ay wangasanaato.
Hadalka ka soobaxay xoghayaha arrimaha dibedda ee dowlada UK wuxuu muujinaya muhiimada Soomaliya ay u leedhahay xasillonida Gobolka iyo dagalka ka dhanka ah aragagaxisada iyo burcad badeeda.waxaa kale oo ay mujineysa tageyradaa dowladda UK in la heelo wadan xasilon oo ay yeeshan shacabka soomaliya.
Warsafaadeed uu soo saarey xoghayaha amuuraha dibada Britain itain William ayuu ku sheegay in safaarada Britain ee Soomaaliya in la furi doono mar ugu horeysay ee la helo fursad la xiriirta dhanka amaanka, isagoo sheegay in ay ku xiran tahay amaanka Soomaaliya dib u furida Safaarada British-ka ee magaalada Muqdisho.
12-ki bilood oo la so dhafay aya dowladaa UK waxay kordhisay howlaha ay ka wado dalka Soomaliya. Bishii May 2010 ayaa waxaa la magacabay Wakiil Sare ee UK u qaabilsan Soomaliya. Febrayo, 2011 Xoghayaha Hormarka Calamka , Andrew Mitchel aya kudhawaqay in dowlladda Britain ay 3-dax jibareyneyso lacagaha deeqaha ee Soomaaliya. Waxaa kale oo la aasaasay ,
Xafiska Britain ee Soomaliya oo hostagaa Safaaradaa Britain ee Nairobi. Xafiska Britain ee Soomaliya waxa uu agasimayaa howlaha in ka badan 30 shaqale oo ka howlgala , Hayadaa Hormarka Caalamiga ee DFID , xafiska arrimaha dibeddda iyo dalalaka Barwaqa sooranka ee Foreign and Common Wealth Office, qeybta ka shaqeyso xasiloonida (Stabilization Unit) iyo wasarada gashandiga.